China Water imikpu na Rotary retort ụlọ ọrụ na-emepụta | Dingtaisheng
Mmiri ịgba Sport
Akuku Retgba Retort
Mmiri Imikpu Mmiri
Direct Steam Mgbagha
Steam & ikuku ikuku
Spgba mmiri na Rotary
Mmiri Imikpu Na Rotary
Steam na Rotary Ntughari
Vetikal Crateless Retort System
Akpaghị aka ogbe Retort System
Na-aga n'ihu na Hydrostatic Sterilizer
Retort tree isi
Ugboro abụọ Layer tree
Ngwunye Ngwunye Ngwakọ
Iweghachite Energy Recovery
Gosi Ihe Di omimi
ỌREC N’ INLỌ STBERTA • NA-ELEP •TA EGO
N'akụkụ ịgba retort
Mmiri ịgba nwoke ịga ụlọ akwụkwọ Retort
Mgbapụta mmiri rotary retort na-eji ntụgharị nke ahụ na - agagharị iji mee ka ọdịnaya dị na ngwugwu ahụ, ka ọ dị ugbu a na-ebugharị mmiri usoro iji meziwanye ịdị n'otu nke ọnọdụ okpomọkụ na retort. A na-akwadebe mmiri ọkụ tupu oge eruo na mmiri mmiri ọkụ iji malite usoro ịgba afọ na oke okpomọkụ ma nweta oke ọkụ na-ebili, mgbe amịchara nwanyị, a na-emegharị mmiri na-ekpo ọkụ ma weghachite ya na mmiri ọkụ iji nweta nzube nke nchekwa nchekwa.
Tinye ngwaahịa a n'ime ụlọ ịgba ụlọ, a na-agbakọta cylinders n'otu n'otu wee mechie ụzọ. A na-ejikwa ụzọ nchebe atọ na-ejikọ ọnụ ụzọ ahụ. N'ime usoro a dum, a na-agbachi ụzọ ahụ n'ụzọ.
A na-eme usoro ịmụba nwa na-akpaghị aka dịka ntinye nke nhazi nke micro-nhazi njikwa PLC.
Na mbido, a na-agbanye mmiri ọkụ dị elu site na mmiri ọkụ ọkụ n'ime ụgbọ mmiri retort. Mgbe agwakọtara mmiri ọkụ ahụ na ngwaahịa ahụ, a na-ekesa ya na-aga n'ihu site na nnukwu mgbapụta mmiri na ọkpọkọ mmiri na-ekesa ndị sayensị. Steam na-agbara site na mmiri vepo igwekota iji mee ka ngwaahịa ahụ gaa n'ihu na-ekpo ọkụ na sterilaiz.
Ngwaọrụ na-agbanwe mmiri mmiri maka ụgbọ mmiri na-emegharị mmiri na-eme ka edo edo edo n'ọnọdụ ọ bụla n'ọnọdụ kwụ ọtọ yana kwụ ọtọ site na ịgbanwee usoro ntụgharị n'ime ụgbọ ahụ, ka e wee nweta oke nkesa ọkụ.
N'ime usoro a dum, nrụgide n'ime arịa retort na-achịkwa mmemme ahụ iji gbanye ma ọ bụ wepụta ikuku site na valvụ akpaka na arịa ahụ. Ebe ọ bụ na ọ bụ mmịnye mmiri, nrụgide n'ime arịa ahụ anaghị emetụta ọnọdụ okpomọkụ, enwere ike ịtọ nrụgide dịka nkwakọ ngwaahịa dị iche iche dị iche iche, na-eme ka sistemu jupụta ebe niile （3 mpempe nwere ike, mpempe 2 nwere ike, ngwugwu na-agbanwe agbanwe, ngwugwu rọba wdg. ）.
Na usoro dị jụụ, enwere ike ịhọrọ mgbake mmiri na mmiri nloghachi iji weghachite mmiri ọkụ na-agba agba na tankị mmiri ọkụ, si otú a na-echekwa ike ọkụ.
Mgbe emechara usoro a, a ga-ewepụta mkpu mkpuchi. Mepee ụzọ ma budata, mgbe ahụ kwadebe maka ogbe ọzọ.
Nhazi nke nkesa okpomọkụ na arịa bụ ± 0,5 ℃, na-achịkwa nrụgide na 0.05 Ogwe.
N'ime usoro a niile, usoro ịgba ọsọ nke ngwaahịa a kpebiri ọsọ ọsọ na oge nke ahụ na-agagharị.
Edo otu nkesa mmiri
Site na ịgbanye ntuziaka mmiri na-agagharị n'ime ụgbọ mmiri retort, a na-enweta mmiri mmiri dị n'otu ọ bụla n'ọnọdụ ọ bụla na ntanetị na ntanetị. Ezigbo usoro maka ịgbasa mmiri n'etiti tray ngwaahịa ọ bụla iji nweta nsị nwoke na nwanyị na-enweghị njedebe nwụrụ anwụ.
High okpomọkụ obere oge ọgwụgwọ:
Enwere ike ịrụ ọrụ nwa oge dị mkpụmkpụ site na ikpo ọkụ mmiri ọkụ na tank mmiri ọkụ tupu oge eruo ma kpo oku site na ọnọdụ dị elu iji sterilaiz.
Adabara mfe oruru containers
Ebe ọ bụ na mmiri nwere mmiri mmiri, ọ nwere ike ịmepụta ezigbo nchekwa na akpa ahụ mgbe ọ na-atụgharị.
Adabara ejizi nnukwu nkwakọ nri mkpọ
O siri ike ikpo ọkụ na sterilaiz akụkụ bụ isi nke nnukwu nri mkpọ na obere oge site na iji nkwụghachi azụ, ọkachasị maka nri nwere viscosity dị elu.
Site n’aghari, nri viscosity dị elu nwere ike ịbụ ihe kpụ ọkụ n’ọnụ na etiti obere oge, wee nweta nsị nsị dị mma. Buoyancy nke mmiri na okpomọkụ dị elu na-ekerekwa na ichedo nkwakọ ngwaahịa n'oge usoro ntụgharị.
Usoro ntụgharị na-arụ ọrụ nwere usoro dị mfe yana arụmọrụ kwụsiri ike
> A na-edozi usoro ahụ na-agbagharị n'otu oge, wee mezie ọgwụgwọ ziri ezi iji hụ na nkwụsi ike nke ntụgharị
> Usoro igwe na-eji usoro mpụga dịka ihe niile maka nhazi. Ọdịdị ahụ dị mfe, dị mfe ilekọta, ma gbatịkwuo ndụ ọrụ ahụ.
> Usoro ịpị ahụ na-anabata cylinders abụọ iji kesaa ma kọmpat na-akpaghị aka, a na-emesi usoro ndu ahụ ike iji gbatịkwuo ndụ ọrụ nke cylinder.
Karama, iko Akpa ibu softener akpa
Products Mmiri ara ehi
Nri dị njikere, Porridge
Akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi
Nke gara aga: Spgba mmiri na Rotary
Osote: Steam na Rotary Ntughari
Akpaaka Mmiri Imikpu Retort
Igwe anaghị agba nchara Water imikpu retort
Mmiri Imikpu Autoclave
Mmiri Imikpu Rotary Autoclave Retort
Na-aga n'ihu na usoro mmiri ọgwụ nke mmiri
Adreesị: dts ulo oru mpaghara, zhucheng, shandong n'ógbè, pr china
Ekwentị: +86 536-6549353